Ubuholi nokuphatha isikhondlankhondla sesiteshi akuzinzile - Bayede News
by Mlamuli Nxele
Ukuhamba kukaMphephethe esiteshini Ukhozi FM kwenze kwaba nokudonsisana okuningi ezingeni labaholi okusadlangile kumanje
Ukudlula ngokuzuma emhlabeni kwengqalabutho yezokusakaza eNingizimu Afrika uDkt uWelcome “Bhodloza” Nzimande kushiye umunyu emphakathini kuleli lizwe. Kuthe kubuhlungu kunjalo, kodwa ngaduduzeka nxa ngizwa amalungu omndeni wakwaNzimande, ozakwabo kwezokusakaza nakwezikaqedisizungu, abalaleli bo-Ukhozi FM, abaholi bemikhakha ehlukahlukene begida bededelana bebabaza amava akhe anohlonze endimeni yokusakaza nezikaqedisizungu.
Okungithokozise kakhulu kodwa ukwazi ukuthi okaMphephethe ubongwe esaphila ngokuhlonishwa ngokunesigqi izinhlaka ezahlukahlukene ngamagalelo akhe angefaniswe nawamuntu. Sekuwumlando ukuthi kuthe ngowezi-2018 uMphephethe wagixabezwa ngeziqu zobudokotela esinye sezikhungo ezinohlonze ezweni iDurban University Of Technology ngenxa yegalelo lakhe ekuthuthukisweni komculo wesintu ngokuwuqhakambisa emsakazweni. Lokhu kuhlonishwa wakunikezwa kanye nezinye izilomo emkhakheni wobuciko okungumdwebi ohlonishwa umhlaba wonke jikelele u-Esther Mahlangu kanye nezihlabani ezasungula iqembu iJuluka oSipho “Nkalimeva” Mchunu noJohhny “uTshikeleshobeni” Clegg nababeka umculo wesintu ebalazweni lomhlaba.
Amava akhe ekuphatheni kahle njengezikhali zamaNtungwa isiteshi esikhulukazi u-Ukhozi FM agquqguzela abanikazi bezinkampani ezizimele eziyizikhondlakhondla zakuleli ukuthi baqome ukuthembela esiphiweni sakhe sobuholi ngokumqoka ukuthi abe ingxenye yobuholi bamabhodi azo. NoHulumeni akasalanga ngemuva ekuklezeni embeleni ogwansile wamava okaMphephethe njengoba wamjuba eningini wamgixabeza isikhundla sokuba usihlalo we-UIF eyengamele izigidigidi zezimbulu zemali yomshwalense wezisebenzi.
UMnyango Wezobuciko Namasiko KwaZulu-Natal waqoma ukuxhasa umkhankaso wokuvundulula amakhono omculo wesintu entsheni awusungule ngaphansi kwenhlangano yokhe yokuthuthukisa umphakathi iBhodloza Nzimande Foundation. Lokhu kuhlonishwa kwamagalelo akhe kugcizeleleke ngokuthi inkonzo yomngcwabo wakhe isingathwe ngokwezinga lombuso wezwe uHulumeni wesifundazwe iKwazulu-Natal.
Okucishe kwakhohlakala ngesikhathi kubatshazwa amagalelo akhe ngesikhathi senkonzo yesikhumbuzo kanye neyomngcwabo ukuthi kubuyekezwe ngokujulile amava akhe ekuholeni u-Ukhozi FM ngempumelelo iminyaka engaphezu kweli-15. Njengomunye wababanenhlanhla yokusebenza ngaphansi kwesandla sakhe njengelungu lesigungu sabaphathi bo-Ukhozi FM, ngifikelwe umuzwa othi angisike elijikayo ngesiphiwo sakhe sokuba umholi esikhungweni esinzima nesibhekwe ngamehlo amaningi njengomsakazo u-Ukhozi FM. Lo muzwa ujiyiswe ikakhulukazi ukuthi selokhu ashenxa uMphephethe esikhundleni sokuba umphathisiteshi, lugqozile uzinzo ekaphathweni kwalo msakazo oyigugu kakhulu emphakathini wakuleli lizwe.
Njengoba ngibuyekeza amava ale ngqalabutho, kubalulekile ukuthi ngidalule ukuthi benginobudlelwano obuhle nobunzulu nayo. Lobu budlelwano basunguleka ngesikhathi sokusebenza ngaphansi kwakhe. Lokhu kunginika isibindi sokuphawula ngingesabi ngalokhu engikubona njengokushabalala kobuchule bokuphathwa kwalesi siteshi esibaluleke kangaka enhlalweni yezakhamuzi zaseNingizimu Afrika. Angigcizelele ukuthi ngiphawula njengomhlaziyi ozimele futhi ongagaqele ukuhlomula ngokuphawula kwami.
Ingxenye enkulu yempumelelo abe nayo uMphephethe ekuholeni u-Ukhozi FM yayingancikile ekusebenziseni amandla esikhundla sokuba umphathi. Impumelelo yakhe yayisekelwe ukwaziwa nokuhlonishwa kwakhe ithimba labasakazi kanye nezisebenzi zemikhakha eyesekela ukusakaza kulesi siteshi nabebekholelwa ebuholini bakhe futhi bangamungabazi ezinqumweni abezithatha. Cishe bonke abasakazi nezisebenzi abaqashwe ngesikhathi sekuphethe yena uMphephethe bebezibona benyelwe inyoni entendeni yesandla ngokusebenza ngaphansi kwesandla sakhe ngoba bakhule bebukela kuye futhi nenhlansi yothando lokusebenza emsakazweni yokhelwa abasakazi abafana naye uMphephethe. Zonke izisebenzi bezimnika indawo yakhe njengomholi ziphinde zigqugquzeleke ukukleza embeleni wakhe ogwanse ngolwazi lokusakaza olungephikiswe.
Amagalelo abanawo eseyisilomo somsakazi lapho abanesandla esikhulu ekudlondlobaliseni izinga lokusakaza kusukela u-Ukhozi FM lusewuRadio Zulu. Kanti futhi amagalelo ekukhuliseni umculo wesintu kwenza abasakazi kanye nezinye izisebenzi zayo yonke iminyango yesiteshi.
Angikubalule ukuthi kwake kwaba khona umdonsiswano owawuphehlwa ozakwabo ababhincisela nxanye emncintintiswaneni wokuqokwa ukuba umphathisiteshi. Lesi senzo walwisana naso ngobuchule obuyisimanga obabusekelwa kakhulu ulwazi lwakhe lwezokusakaza olunzulu nokwenza leyo mizamo yokumudla izithende ishabalalise okwamathe emhlabathini owomile.
Alikho isoka elingenasici ngakho-ke naye uMphephethe bekwenzeka akhubeke emsebenzini wokuba umphathi kwasize phela ukuthi naye ngumuntu. Thina esaqashwa ngezifiso zakhe ukuthi sibe yingxenye yesigungu sabaphathi besiteshi sagcina simazi lapho entekenteke khona ngokwamakhono adingeka ukubhekana nomsebenzi usuku nosuku. Phezu kunjalo, kunokuthi sigiye ngethambo lakhe, sasilumane indlebe sisukumele phezulu siqinise kuleyo ndawana enobuntekenteke ukuze yena njengomholi wethu angahlazeki. Konke lokhu sasikwenziswa ukuthi sasimhlonipha njengengqalabutho kungekho kithina owayezibona engancintisana naye nowayenenhloso yokumembula izinqe ukuze abukeke njengesehluleki emsebenzini wakhe.
Intshisekelo ayenayo ekucobelelaneni ngolwazi olunzulu lokusakaza ngokomoya aluqokelela iminyaka kwamakhela ugazi ezisebenzini. Ubephinde abe ngumholi ovulelekile ekwamukeleni imibono yozakwabo abangaphansi nabangaphezulu kwakhe ngokwezikhundla kanti nesiphiwo sakhe sokukwazi ukusebenza nezinhlobo ezahlukene zabantu besimnika ithuba lokwamukela ulwazi olusha.
Okunye okuphawulekayo ngaye ukuthi ubengeyena umuntu wamatulo namathizethize uma kusetshenzwa nobekwenza izisebenzi zethembele ebuholini bakhe obebuneqiniso nobuqotho. Ubenisiphiwo sokunonga izinkulumo zomsebenzi ngamahlaya uma kusemihlanganweni nobekwenza angeneke ezisebenzini kozakwabo abebededele igazi bakujabulele ukufinyelelisa imibono kuye njengomholi. Phezu kunjalo wayengenqeni ukuthetha nokuqinisa amagama ngenhloso yokukhalima akubona kungalungile.
Kuwumbono wami ukuthi uMphephethe walibeka esicongweni izinga lokuhola u-Ukhozi FM nokwaholela ekutheni luhlonishwe kakhulu. Sekucacile ukuthi umholi ozahamba ezinyathelweni zakhe, kunzima.
Akungimangazi ukuthi selokhu abeka phansi izintambo zokuba umphathisiteshi, akukaze kwaba khona uzinzo ekuphatheni u-Ukhozi FM. Kuhleze kuzwakala imibiko yomdonsiswano ekuphathweni kwalesi siteshi kuphinde futhi kuvele obala izigameko nezimpawu ezenza ngizibuze ngiziphendule ukuthi kwakhala nyonini ebuholini balo msakazo. Njengomuntu owake walunguza ekuthwaleni isisindo nengcindezi yokuphatha lesi sikhondlakhondla sesiteshi, ngiye ngiwazwele amalungu esigungu sabaphathi abasuke bephethe ngaleso sikhathi.
Ngiyaye ngizibuze ngiziphendule ukuthi kazi umgodi owambiwa uMphephethe ngamava akhe ngesikhathi eqhoqhobele lesi sikhundla uyoke ugqibeke yini.
Kuningi ukuqagela okuba khona ngembangela yokugqoza kozinzo ekuphathweni kwalesi siteshi esiyisizinda solwazi nenjabulo nemfudumalo ezigidigidini zabalaleli. Ezami izinsolo zikhomba ukuthi inhlangano iSABC kanye noHulumeni wezwe okunguyena owengamele le nhlangano kabasiqondi ngokuphelele isisindo nokujiya kwesikhundla sokuhola u-Ukhozi FM. Lokhu kuyaxaka ngoba uma ubheka indlela uHulumeni wezwe othembele ngayo kuMphephethe ngokumnika izikhundla ezinohlonze emva kokushenxa ekuphatheni u-Ukhozi FM, kufanele engabe kucacile ukuthi isikhundla sokuba umphathisiteshi sidinga umuntu onamava, nozomelana nengcindezi kanye nezinselelo ezivame ukuqhamuka ngaphakathi esiteshini kanye nangaphandle.
Ekungaqondini kwayo lesi simo, le nhlangano yenza amaphutha amaningi nobudedengu emizamweni yayo yokuletha uzinzo ekuphathweni ko-Ukhozi FM. Sezibeningi kakhulu izigameko ezikhombisa noma ngubani obuka ngehlo elijulile ukungabi bikho kozinzo ebuholini balo msakazo onendima enkulukazi empilweni yabalaleli bawo. Kucaca ukuthi abaphathiswa abangena kulesi sikhundla baphoseka bakhalakathela emgodini ojulile owambiwa ngamava kaMphephethe. ISABC ifanelwe ukuzinuka amakhwapha izihluphe ngalesi simo sokugqoza kozinzo ebuholini bo-Ukhozi FM.
Ngokwami ukubuka, iSABC kanye noHulumeni kumele babuyekeze uhla lwezimfanelo zomuntu olungele ukuba yingxenye yesigungu sokuphatha isiteshi u-Ukhozi FM. Angiboni kulukhuni kakhulu ukuhlonza lezi zimfanelo ngoba selikhona izinga okungalinganiswa ngalo ukuze kuncishiswe amathuba okuthi iSABC ibuye neboza ekuthungatheni abaphathi abazoletha uzinzo babuyise nesithunzi bakhande nentshisekelo kubasakazi kanye nasezisebenzini zeminye iminyango esekela ukusakaza kulesi siteshi.
Lo mbono wami kungenzeka ukuthi ushaya eceleni kodwa nginesiqiniseko sokuthi akuyimi ngedwa okhathazekile ukuthi akudluli isikhathi esingakanani kungazwakalanga imibiko yokuhaqeka kwalesi sikhondlakhondla sesiteshi izinxushunxushu nomdonsiswano ongathi shu nojivaza isithunzi salo msakazo ohlalelwe ukulima indima enohlonze kangaka emphakathini.
Ngiphonsela inselelo labo abajutshwe ukuthungatha abaholi abazoletha uzinzo ku-Ukhozi FM ukuthi bajule kabanzi ukuze lo msakazo ungagcini usuyigobongo nje ekubeni kusekuningi okusafanele kuklezwe yisizwe embeleni wo-Ukhozi FM. Abaphathi beSABC bafanelwe ukukhunjuzwa ukuthi u-Ukhozi FM isiteshi esibaluleke ngokunzulu empilweni yabalaleli baso ngakho-ke konke okuthintana nalo u-Ukhozi FM kubhekiwe umphakathi.
Lokhu kugqoza kozinzo ekuphathweni kushiya imibuzo eminingi. Omunye wemibuzo uthi, kungenzeka yini ukuthi abaphathi beSABC ekumkhulu layo baluthatha kancane u-Ukhozi FM? Uma ngabe imbala kunjalo, kochaza ukuthi ngisho umphakathi osakazelwa u-Ukhozi FM uthathwa kancane iSABC nokuyinto ephambene nemigomo namagunya kweSABC ngokomthetho wezokusakazela umphakathi (Broadcasting Act) ukuthi isakazele umphakathi ngenhloso enhle yokuwazisa, ukuwufundisa kanye nokuwuqedisa isizungu.
Mlamuli Nxele Feb 26, 2021